Maitiro ekudzima, kutangazve kana kumisikidza iyo iPhone X | IPhone nhau
Yakanyanya minimalism, ndizvo zvaida kuitwa nekambani yeCupertino neiyo iPhone X, zvekuti takasara tisina bhatani reKumba iro rakaratidza zviteshi zve iPhone zvakanyanya. Ngazvive sezvazvingaite, ikozvino kumwe kusahadzika kunotanga kubuda nezve mashandiro uye maitiro echiratidzo eiyo iPhone X, asi muActualidad iPhone tasvika kuzokupa tambo.
Ndiani angade kudzima iyo iPhone X? Iwe hauzive asi Nhasi tiri kuzokuratidza kuti ndedzipi nzira dzekudzima, kutangazve kana kumisikidza iyo iPhone X zvinoenderana nezvaunoda. Kana iwe uine iPhone X uye kusahadzika kwakawanda, haufanire kupotsa ichi chidiki asi chakakosha dzidziso.
Izvi zviito zvitatu hazviwanzo kuwanikwa muIOS, saka tinogona kuve nekusahadzika kana zvasvika pakuita mashoma mabasa, ngatiendei ikoko.
Ndingaite sei kuvhara pasi kana kutangazve yangu iPhone X? Kudzima iyo iPhone X, zvinoshamisa kuti, tichafanirwa kudzvanya bhatani reMagetsi (kurudyi) uye Vhoriyamu + bhatani (kuruboshwe) kweanenge masekondi matanhatu, kusvikira zvaratidza pachiratidziri "Slide kudzima", ipapo kutsvedza switch kuchadzima iyo terminal zvachose.
Ndingaite sei kumanikidza kudzima iyo iPhone X? Dzimwe nguva runhare runogona kubatika, nekuda kweizvi isu tinofanirwa kushandisa "kumanikidzwa kudzima" ine kiyi musanganiswa inonakidza kwazvo. Isu tinofanirwa kumanikidza uye kuburitsa vhoriyamu kumusoro, kudzvanya uye kuburitsa vhoriyamu pasi uye ubatise bhatani remagetsi, ipapo iro Apple dziva richaratidzwa uye iyo terminal ichatangazve.
Ndinoita sei kumisa iyo iPhone skrini ndisina kuivhura? Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kungo gadzira diki-yechipiri kubata chero pahwindo pairi yakavharwa uye isu tichaona iyo yekuvhara skrini.
Iwo mapfupi maviri ekuda kuzivaMabhatani akafanana anoshandiswa kune ese marudzi ezviito zvechipiri senge skrini. Isu tinovimba zvakare zvakare kuti dzidziso yedu yakubatsira iwe kuti ubude mumatambudziko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima, kutangazve kana kumutsa iPhone X
Kuti uite iyo skrini iwe haudi maviri echipiri kubata, chingobata kune "zvakajairika" skrini.
chaizvo nekubata zvakapusa zvinokwana. Usapiwe chero refu kudhinda.
Iyo iPhone X inokombama?
Apple yatove kunyevera nezve "yakatsva skrini" yeiyo iPhone X